တစ်စက္ကန့် လျှင် အမြန်နှုန်း 1 GB ရှိသည့် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု ကို Google စတင် | Freedom News Group
တစ်စက္ကန့် လျှင် အမြန်နှုန်း 1 GB ရှိသည့် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု ကို Google စတင်
by FNG on August 13, 2012	သတင်း ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ ကြီး တစ်ခု ဖြစ်သည့် Google က အမေရိကန် နိုင်ငံ
တွင်း ရှိ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု များ ၏ ပျမ်းမျှ မြန်နှုန်း ထက် အဆ ၁၀၀ ပိုမို သာ လွန် မှု ရှိ
သည် ဟု ဆိုသော Google Fiber အင်တာနက် ၀န် ဆောင် မှု ကို ကန်ဆပ်(စ) စီတီး မစ်ဇူရီ
ပြည်နယ် တွင် စက်တင်ဘာလ မှ စပြီး စတင် တော့ မည် ဖြစ်သည်။ Fiber ၀န်ဆောင်မှု ကို မတ်လ က ကန်းဆပ်(စ) စီတီး ကန်းဆပ်(စ) မြို့တွင် စတင် ခဲ့ ပြီး နောက်
နောက် ထပ် တစ် မြို့တိုးချဲ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကနီဦး တပ် ဆင် ခ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျသင့် မည် ဖြစ်
ပြီး တစ်နှစ် စာ ချုပ် သက် တမ်း အတွက် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၇၀ ၀န်ဆောင် ကြေး ပေး ရမည်
ရုပ်သံ လိုင်း ပါ ပါဝင်ပါ က တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ ၁၂၀ ကျသင့် မည် ဖြစ်သည်။ ရံဖန် ရံ ခါ တွင်
မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ရှိ အင်တာ နက် မြန်နှုန်း ထက် ပင် ပိုမို မြန်ဆန်သည့် 5Mbps ဆိုလျှင် Google
က တပ် ဆင် ကြေး သာ ယူ၍ ၀န်ဆောင်ခ ယူမည် မဟုတ် ဟု Google Fiber ဘလောက် တွင်
Google ၏ မြန်နှုန်း မြင့် အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု သည် အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင်း ရှိ အခြား အင်တာ
နက် နှင့် ရုပ်သံ လိုင်းများ ဖြစ်သည့် Comcast နှင့် Dish Network တို့၏ ဈေးကွက် ကို စိမ်
ခေါ် ရာ ရောက် နေသည် ဟု Tech Crunch က ရေး သား ထား သည်။
ကန်းဆပ်(စ) စီတီး မှ အင်တာနက် သူဆွဲ သူ ဖေဘီယန် ရူဒေါဖ် က မကြုံ ဘူး တဲ့ အမြန်နှုန်း ပဲ မိုး
ပြို ဆင်း လာသ လို ပဲ ဟု CNET ကို ပြောသည်။
အင်တာနက် နှင့် ရုပ်သံ တွဲဖက် ထား သည့် ၀န်ဆောင်မှု ကို ရယူလျှင် ဒေါ်လာ ၃၀၀ နီးပါး တန်ကြေး
ရှိသည့် Google Nexus7tablet ကို အခမဲ့ ရရှိ မည် ဖြစ်သည်။
လစဉ် အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ထောင်ချီ ရှိသည့် Google ၏ အင်တာနက် ၀န်ဆောင် မှု တွင် ဖိုင်
ဘာ ဖန်မျှင် ဆက်သွယ် မှု ကို အသုံး ပြုထား သည်။
Google Fiber TV Is Still The Best Deal Around (In Kansas City) (webpronews.com)
A Fiber Future: How Will High-Speed Fiber Networks Affect School Communication? (socialschoolpr.wordpress.com)
From: နည်းပညာ သတင်း	← ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၁၄.၈.၁၂ ) မှ ( ၂၁. ၈၁၂) ထိ တပတ်စာဟောစာတမ်း
အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးခြင်း →
ဟုတ်တယ်ဗျို့ တစ်ကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အိပ်ရေးကောင်းကောင်းအိပ်လို့ရပြီဗျို့ ခုဆိုညတိုင်းလိုင်းကောင်းမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေစရာမလိုတော့ဘူး တစ်ခုတော့ရှိတယ် သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အမေရိကားကို သာမြန်မြန်သွားပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ မြန်မာပြည်ကတော့ ရွာဦးကျောင်းကကြေးစည်ကြီးလိုပဲဗှာ……။
November 8, 2012	ko htite	#
အားကျတယ်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာဆို ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ တစ်လကို 6000 လောက်ပဲကျတာ
နောက်မျိုးဆက် 10 ဆက်လောက်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ
August 31, 2012	Comments are closed.
Get the daily news enter your mail Join 569 other followers
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishMyanmar Emerges From the ShadowsMyanmar's women boxers land blows for equalitySoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockoutUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsMyanmar's MPs lack resourcesUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.Korea27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,612,691 hits
10 Things You Need To Know Myanmar's Persecuted Muslim Minority huff.to/1cUUlSK via @HuffPostWorld 14 hours ago
WATCH: Buffalo FLIPS Attacking Lion Into The Air huff.to/1cONUAn via @HuffPostGreen2days ago
abcnews.go.com/Business/wireS… 1 week ago
Follow @freedomnews_usFNG ၏ သတင်း နှင့် ဖော်ပြ ထား မှု များ ကို ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန် Select Month December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 FNG LATE NIGHT SHOWFNG RSS RSS - Posts RSS - Comments